Alakamisy, 7 May 2020 Ny ran'i Jesosy Vomanga sy saonjo lasa koba, fiz Ny nandravana an'i Jerosalema, fiz Taova fananahan'ny vehivavy Inona moa no maha zavadehibe ny fanazavana ny Baiboly?;
Alarobia, 6 May 2020 Ho tena zanak'Andriamanitra Iza moa no anaranao? Solomona Aza manao tsobodranonndRamiangaly Ny nataon'ny fahotana tamin'ny fontsika;
Talata, 5 May 2020 Mpanolotsaina, mpmpianatra Fampitahana akondro sy paoma Fitomboana arapanahy fiz Fanomanana ny tanora hiatrika ny ho avy Ny Baiboly sy ny kolontsainy;
Alatsinainy, 4 May 2020 Mitia sy mikolokolo no fanafody tsara indrindra Vina na faniriana Mihira sy mikalo ho an'ny Tompo Teknikafambolena Petsay Fiz Ny Baiboly sy ny teny nanoratana azy;
Alahady, 3 May 2020 Izay sitrapon'Andriamanitra atao fa aza miraharaha izay lazain'ny olona Bonbon vita avy @ voana mahabibo Andrompahasoavana Didier & Minoarisoa ( Andriamanitra no Mpiaro ) Ny fomba famakiantsika ny Baiboly ;
Sabata, 2 May 2020 Avelao ho tantanany II Mpanjaka Babylona arapanahy fiz Ireo takelaby manambara fa aefa akaky Kristy, fiz NAHOANA NO ILAINA NY FANAZAVANA NY BAIBOLY?;
Zoma, 1 May 2020 Ho avy ny filohampirenena Fotoana , fiz Na izany aza matokia fiz TSy ampoizina Ny Soratra Masina irery ihany, fianarana fanampiny;
Alakamisy, 30 Aprily 2020 Aoka hanana fisainana madio Concombre Ny fandravana an'i Jerosalema Herisetra sy ny sakafo I ELLEN G. WHITE SY NY “SOLA SCRIPTURA” (Isa. :);
Alarobia, 29 Aprily 2020 Mivavahà ka aza mitsahatra fa izay mitady no hahita Mafana sy mazava nefa mahasalama Corona Fitondrantena modely Ny Baiboly ihany no manazava ny teny ambarany;
Talata, 28 Aprily 2020 Ilay zanak'Ondry be voninahitra Tsara ho fantatra ny amin'ny otrik'aina Manaiky ny herin'Andriamanitra miasa Fitaizana sy fanabeazana Mazava ny voalazan'ny Biboly momba izay ampianariny;
Alatsinainy, 27 Aprily 2020 Ora volamena Ny fitsarana entiko eo amin'ny tenako Aoka tsy ho azon'ny fakampanahy hanadino hianao Teknika fambolena petsay Fiz Misy hevitra mifanohitra na mifanipaka ve ao anatin'ny Baiboly ;
Alahady, 26 Aprily 2020 Fitiavana tsy ambara amin'ny teny Tahiry sauce vita amin'ny sesame Aretina tsy sitrampanafody Fiderana Ny Baiboly irery ihany ;
Sabata, 25 Aprily 2020 Ho avy tsy ho ela Babylona arapanahy , fiz Ireo takelaby manambara fa efa akaiky ny fiavian'i Kristy Ny soratra Masina irery ihany;
Zoma, 24 Aprily 2020 Izay afafin'ny olona no jinjainy Ireo zavaboary miaro @ ranomasina Na izany aza matokia Ho an'izay efa tafiditra @ sarotra Ireo fototra dimy mibaiko ny fahatakarana ny ten'i Andriamanitran, fianarana fanampiny;
Alakamisy, 23 Aprily 2020 Ampitahainao ami'iza ny fahafahan'Andrimanitra manampy anao? Voly ovy Tahaka ny t@ andron'i Noah, fiz Corona virus Ny Baiboly;
Alarobia, 22 Aprily 2020 fitaka ny miseho ivelany Nandresy aho Corona Mijery lafitsaranjavatra Ny fisainan'olombelona;
Alatsinainy, 20 Aprily 2020 Asehoy ny maha zanak'Andriamanitra anao Fanamarinana ny fankafizana ny tena Tsy irery fa manana Mpamonjy hianao Teknika fambolena petsay Fiz Ny amin'ny fanandramana ;
Alahady, 19 Aprily 2020 Motsikia Vomanga matsiro Manakaiky ny fanavotana Gervais Jamba Ambatondrazaka Ny toeran'ny fombandrazana eo ami'ny fivavahana;
Sabata, 18 Aprily 2020 Manome @ fahafenoany Andriamanitra Miankohofa eo anatrehany , fiz Ny fitsanganana @ maty NY Baiboly, fototra iorenan'ny fampianarantsika;
Zoma, 17 Aprily 2020 Aza matahotra fa eo Aho Fotoana , fiz Kristy sy ny lalàny HAfatra tsy fitovian'ny finoana Ny fomba fijerin'i Jesosy sy bt apôstoly ny Baiboly;
Alakamisy, 16 Aprily 2020 Aza miahiahy Voly volana Aprily Mivavaha mba tsy ho andevon'ny ota Coronavirus NY APÔSTÔLY SY NY BAIBOLY (Gal. :);
Alarobia, 15 Aprily 2020 Ranomaso hody fifaliana Miandrandra Tsy fahazakana fanakianana Jesosy sy ny tantara ao amin'ny Baiboly
Talata, 14 Aprily 2020 Mihoatra noho ny tsintsina aho Fampitahana akondro sy paoma Itafio Jesosy Ireo toetra sy fomba amampanaon'ny zatovo Jesosy sy ny Baiboly
Alatsinainy, 13 Aprily 2020 Toetra tsara sy mendrika Fiheverantena ho ambony Mamolavola anao Andriamanitra Teknika fambolena petsay Jesosy sy ny lalana
Alahady, 12 Aprily 2020 Anio ihany ny antsika Pain perdu Ody fahoriana Gervais jamba Ambatondrazaka Voasoratra hoe
Sabata, 11 Aprily 2020 Ataovy izay azonao atao, ankino @ Jehovah ny lalanao II Mpanjaka Miankohofa eo anatrehany fiz Mankaiza ny maty? Ny fomba fijerin’i Jesôsy sy ny apôstôly ny Baiboly;
Zoma, 10 Aprily 2020 Tia anao Aho, ary ianao dia zanako Fiverenan'i Jesosy Mety hisy ny fanenjehana Ohatra telo, olana arapitiavana Ny niavian'ny Biboly sy ny toetoetrany, fianarana fanampiny;
Alakamisy, 9 Aprily 2020 Ekeo ny fahadisoana dia mandraisa lesona Zezika omby sy akoho Aza tapahina ny fifandraisana amin'Andriamanitra Tarehy, fiz Mahatakatra ny Baiboly ampinoana;
Alarobia, 8 Aprily 2020 Aoka ho zaza mahatoky Fanomezampahasoavana mahay mandanjalanja Tok Fahaizana mandray fanapahankievitra Ny fitoviana eo amin'i Kristy sy ny Soratra Masina;
Talata, 7 Aprily 2020 Avelao hiasa ao amponao ny Fanahy Mety ho ny saina ihany ve no mankarary? Tandremo ny fanomezampahasoavana Ireo toetra sy fomba amampanao mampiavaka ny zatovo Ny Baiboly tenin'Andriamanitra voasoratra;
Alatsinainy, 6 Aprily 2020 Ataovy toy ny ho an'Andriamanitra Sary momba ny tena Mamolavola ny toetranao sy manomana ny hoavinao Andriamanitra NATUMAD Fambolena Sakaibe Mme Nirina Ny fomba itarihan'ny Fanahy Masina ny mpanoratra ny Baiboly;
Sabata, 4 Aprily 2020 Ny olona mijery ny miseho ivelany, Jehovah mijery ny fo II Mpanjaka Miankohofa eo anatrehany, fiz Ny fahalalana onony Avy aiza ny Baiboly, ay manahoana ny toe toetrany?;
Zoma, 3 Aprily 2020 Aza tia mifaninana Fampanantenan'i Jesosy ny Fanahy Masina Mangina mitsahara fiz Antokompinoana samifafa fiz Ny mampiavaka ny Baiboly, fianarana fanampiny;
Alakamisy, 2 Aprily 2020 Mamaly vavaka Andriamanitra trondro asaly fiz Mamono ny tenan'ny ota Tarehy fiz Manova ny fianan'ny olona ny Baiboly;
Alarobia, 1 Aprily 2020 Aleo miteny hoe soa ihany Ny tenako manontolo Fanomezampahasoavana mandajalanja fiz Fahaizana mandray fanapahankevitra Ny Baiboly amin'ny maha tenin'Andriamanitra azy;
Talata, 31 Martsa 2020 Aza sodokan'ny teny, ny voany no ahafantarana azy Zavadehibe ny mitsiky Tandremo ny famakianteny, fananarana, fampianarana Ireo toetra sy fomba amampanao mampiavaka ny zatovo Ny maha faminaniana ny Baiboly;
Alatsinainy, 30 Martsa 2020 Sarobidy ny Baiboly Ny fanamboniantena Mba maniry te hahita an'i Jeosy ve hianao Fambolena papay Fiz Nohanjambaina mba hahita an'I Kristy ;
Alahady, 29 Martsa 2020 Aza manahy ny ampitso Concombre asiana sesika Ohatrinona Mme Bodo Antanetibe VI Ny tenin'Andriamanitra velona ;
Sabata, 28 Martsa 2020 Ireo fanirian'ny fonao II Mpanjaka Miankohofa eo anatrehany fiz Ny fitondrantena kristiana Fomba hahatakarana ny Soratra Masina;
Sabata, 16 Janoary 2021
Ampiasao ny tafiodrivotra hiakarana ambony I Tantara Fijalian'ireo ho very Mpamonjy eo akaiky mandrakariva Fomba henjana kokoa;